Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Qaxootiga Aduunka oo si fiican loogu xusay dalka Sanca
Maalinta Qaxootiga Aduunka oo si fiican loogu xusay dalka Sanca
Sanca Yemen-Axad Maalinta Qaxootiga Dunida ayay si wada jir ah ugu qabteen Soomaalida Ogaadeeniya iyo Qoomiyadda Oromoda Guriga weyn ee loo yaqaan GurigaQaxootiga Soomaalida iyo Oromoda ,maalinimodii Axada ee bisha Juun 22-keeda,2014.
Munaasabadan oo si heer sare ah ay u soo agaasimeen labada Gudi ee Soomaalida Ogaadeenia iyo Oromada ayaa loogu dabaal dagay Maalinta loo asteeyay ,World Refugee Day oo la qabto sanadkii ba bisha Juun 20-keeda ,ayaa ka dhacday barqanimodii Xaafadda Saafiya ee Magaalada Sanca.
Xafladan oo ay ka soo qayb galeen dhamaman qaybaha bulshada ka la duwan sida Ururka Haweenka Ogaadeeniya, Ururka dhalinta Ogaadeenya ee OYSU , Gudiga Jaaliyadda Ogaadeeniya ee (JOY), iyo masuuliyiin ka ka la socotay Ururo Caalami ah iyo kuwo maxaliya ba sida Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan UN Refugee Agency, hay’adda wakiilka ka ah Ogaden-Oromo Refugee Center ee International Relief &Development (IRD) ,iyo Adventist Development and Relief Agency (ADRA) oo arimaha adeega bulshada u qabata dadka Qaxootiga magaala jooga ah.
Masuulka ka socday Hay’adda Qaramada Midoobay Laanta Ilaalada ama Protection-ka , Mr. Gamal Al-Jabi ayaa si qoto dheer uga hadlay duruufaha ku xeeran Qaxootiga Dalka Yemen oo naftooda halis u soo galiyay si ay ammaan ugu helaan wadanka Yemen. Waxa uu Al-Jabi gaadhsiiyay tirada Qaxootiga dunida in ay sanadkan hor u dhaaftay 50 Milyan. Sargaalkan ayaa xusay in ay UNHCR-tu da’daal dheer ugu jirto sidii ay wadamada barwaaqa sooranta ah, albaabadooda ugu furi’lahaayeen Qaxootiga uu mudadiiso dheeraatay iyo kuwa baahida gaarka ah leh, si ay u helaan nolol dhaanta midda ay haatan ku jiraan.
Masuuliyiinta Gudiga Qaxootiga Ogaadeeniya iyo Oromoda ayaa hadalo meelo badan taabanaya oo ku saabsan waxa qaxooti ka dhigay ee asaagood ka reebay iyaga oo xusay in aynan marna ba qaxootinimo doorteen ee ay duruufaha ka jira Arligoodi ku qasabtay. Waxa ay sidoo kale ,goobta ka soo jeediyeen in Maamulada iyo wadamada Dariska ah sida Jabuuti, Puntland, Somaliland iyo Galmudug ku dhaliilay daryeel la’aanta iyo xilkasnimoda ay ka muujinayaan dadyowga ku soo qaxay ,iyaga oo bay dhaheen gacanta kaga ridaya is la cadowgii ay ka soo cara’reen halka ay ka magan-galin lahaayeen.